2021 NYC Summada Cad ee Soosaaraha Hoggaaminta Sannadka ee Label oo la siiyay GVB Biopharma
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » 2021 NYC -ga Calaamadda Cad -Cad ee Hoggaamiyaha ugu Weyn Soo -saaraha Sannadka ayaa la siiyay GVB Biopharma
2021 NYC -ga Calaamadda Cad -Cad ee Hoggaamiyaha ugu Weyn Soo -saaraha Sannadka ayaa la siiyay GVB Biopharma
GVB Biopharma, hogaamiyaha hemp-derived cannabinoid wax soo saarka firfircoon ee walaxda firfircoon iyo qaabaynta badeecada sumadda cad, ayaa maanta lagu dhawaaqay in loo magacaabay soo saaraha hogaaminaya sanadka 2021 New York City Label Expo. Munaasabadda, oo la qabto sanad walba xilliga dayrta, waxay u shaqeysaa sidii bandhig heersare ah iyo bandhig bandhigeed oo loogu talagalay hormoodka tafaariiqda internetka.
Abaalmarintu waxay aqoonsanaysaa soo-saare heer sare ah oo soo saara alaabada summada cad, taas oo u oggolaanaysa inay dib-u-cusboonaysiiyaan qolo saddexaad. Bandhiga White Label Expo wuxuu qeexayaa seddexda shuruudood ee xulashada ee soo saaraha Hogaaminaya Abaalmarinta sanadka: xiriir aamin ah oo lala yeesho macaamiishooda, nidaamka xakamaynta tayada ee hogaaminaya warshadaha iyo khibrad macmiil oo aan kala go 'lahayn. Saddex final ayaa la doortay, GVB Biopharma waxaa loo doortay inuu noqdo ku guulaysta in ka badan 400 oo shirkadood oo u qalma. Abaalmarintu waa mid ka mid ah afar abaal-marin oo warshadeed oo lagu bixiyo waxqabadka wanaagsan ee dhinacyada wax-soo-saarka, hal-abuurka badeecadaha, adeegga iyo calaamadaynta gaarka ah.
"Waxaan si adag uga shaqeyneynaa in aan horay ugu sii riixno warshadaha alaabada cusub iyo heerarka u hoggaansanaanta," ayuu yiri Phillip Swindells, Sarkaalka Sare ee GVB Biopharma. Shirkadda ayaa lagu aqoonsaday Bandhigga White Label Expo si ay u soo saarto wax soo saarkeeda iyo qaabka farsamaynta, taas oo abuurtay halbeeg warshadeed cusub oo loogu talagalay ilaalinta tayada iyo daacadnimada hawlgalka.
Adkaynta tillaabooyinka u hoggaansanaanta GVB Biopharma iyo heerarka tayada badeecada ayaa ka dhigay mid ka mid ah magacyada aadka loo ixtiraamo ee warshadaha hemp cannabinoid. Iyada oo ay weheliso tas-hiilaad casri ah oo loogu talagalay ka-hortagga hemp ee Oregon, hawlgallada wax-soo-saarka macaamilka ee calaamadda cad ee Las Vegas, iyo xafiisyada iibka qaranka ee Los Angeles, Chicago, Denver iyo Koonfurta Florida, GVB waxay muujisay awood koror ballaaran. . Gaadhideeda ballaaran ee heer qaran iyo mid caalami ah ayaa u oggolaanaysa inay buuxiso baahida qarxa ee hemp cannabinoids oo ay noqoto lammaane warshadeed lagama maarmaan u ah ganacsatada iyo noocyada u adeega baahiyaha suuqan.